China Manufacturer ahaziri Ikanam Banye Light Glass Neon ịrịba ama maka Shop Bar Store Home Manufchọ Mma Manufacturers na Suppliers | PDL
Igwe anaghị agba nchara 3d ịrịba ama Letter Advertising Metal Si ...
Shop ikanam Banye N'èzí illuminated signage Front Lit ...
New Style igwe anaghị agba nchara Mere Front Lit & Halo ...
Omenala Dugara CNC tingcha Gold igwe anaghị agba nchara Backlit ...
Emeputa ahaziri Ikanam Banyere Light Glass Neon ịrịba ama maka Shop Bar Store Home cochọ Mma
1.Materials: Glass tube, Acryli Backboard ma ọ bụ Metal shelf
2.Handmade na Free Sample Dị
3.Mmeputa Oge bu Ubochi 3-4
Oge mbupu 4-5 bụ oge
5.Safe ngwugwu: Afụ maka Inner na Atọ-atọ Wooden Case
Nha:Ahaziri, Ejiri mee Real Glass tube, B LEDGH LED Ikanam. Ọ bụrụ na ịchọrọ nha ndị ọzọ biko kpọtụrụ anyị, anyị nwere ike izute ihe dị iche iche ịchọrọ maka nha, agba, ma ọ bụ ụkpụrụ. OKWU: Mbupu (DHL ma ọ bụ FedEx): 2 ~ 3 ụbọchị.
Agba:Dị ka e gosiri na foto a (Ihe ịrịba ama ndị ahụ na-adọrọ adọrọ karịa foto :). Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ndị ọzọ acha, biko zitere anyị ozi a.
Ihe ntanetị ọkụ ọkụ:100-240V. Ihe ahụ na-abịa na plọg nke dabara maka mba niile. Ihie dị mfe ma agaghị ekpo oke ọkụ mgbe eji. Anyị agafeela ule dị mma tupu anyị ebubata ya, wuru ya na mbadamba akara acrylic na mgba ọkụ ọkụ na eriri eletriki, ọ dị mfe iburu, kwụgidere ma chịkwaa.
Ngwa:Enwere ike iji ọkụ neon dị ka oriọna oriọna, ọkụ ọfụma na nnukwu onyinye ahaziri iche. Ezigbo ụlọ oriri na ọ pubụ pubụ ime ụlọ mmanya na-ehi ụra ime ụlọ nkwari akụ ụlọ nkwakọba ihe na ezumike. Ọ bụkwa onyinye buru ibu maka afọ ncheta, ụbọchị ọmụmụ, Valentines ma ọ bụ onyinye onyinye.
Nnọchi:Enwere ike dochie tubes niile, mgbe ụfọdụ, tubes ga-agbaji n'oge njem, biko zitere anyị foto a iji gosipụta akụkụ ndị gbajiri agbaji, anyị ga-emeso ya n'ime 24hrs ma hazie iji zipu nnọchi, nke ga-akwụ anyị ụgwọ. IHE: Otu afọ akwụkwọ ikike neon ịrịba ama, Neon ihe ịrịba ama na-aka mere ngwaahịa, ma ọ bụrụ na ọ bụghị àgwà nsogbu, anyị anaghị anabata nloghachi. Biko jiri nwayọ nye iwu ka ịkpachara anya.
Ihe onwunwe Ihu: Glass tub
Akụkụ: Glass Tube
N'ime: Ikanam ọkụ
Azụ: Acryli / Metal shelf
Nha Ngwaahia imewe
Agba Ahaziri site na eserese agba
Ihe ntụgharị Mmepụta: 5V na 12V
Mee nwuo Hight ìhè na ụdị nile nke agba Ikanam modul
Isi mmalite ọkụ Ikanam modul / Egosiputa Ikanam / Ikanam warara
Akwụkwọ ikike Afọ 4
Ọkpụrụkpụ Ngwaahia imewe
Nkezi ndụ ha niile N'ime 35000hrs
Mmejuputa OA, RoHs, UL
Ngwa Lọ ahịa / Hospitallọ ọgwụ / ụlọ ọrụ / họtel / ụlọ nri / wdg.
Nkwakọ ngwaahịa Afụ n'ime na akuku osisi ply atọ n'èzí
Kwụ ụgwọ L / C, TT, PayPal, Western Union, gram ego, Escrow
Mbupu Site awara awara (DHL, FedEx, TNT, UPS wdg), 3-5days
Site n'ikuku, 5-7days
Site na ụgbọ mmiri: 25-35days
Etiti oge Daysbọchị 3-5 kwa otu
Mentkwụ Tergwọ Okwu 30% nkwụnye ego na 70% itule mgbe gosiri foto
Nke gara aga: Hot Sale Omenala ikanam Neon ịrịba ama Wall nọkwasịrị n'ịnyịnya na Flex Neon Light Advertising ịrịba ama
Osote: Omenala 3d Letter Light Business N'èzí Advertising Channel Ikanam ịrịba ama
Q1: Gịnị bụ akwụkwọ ikike nke ngwaahịa gị?
A1: Akwụkwọ ikike maka acrylic bụ afọ 5; Maka Ikanam bụ afọ 4; maka transformer bụ afọ 3.
Q2: Gịnị na-arụ ọrụ okpomọkụ?
A2: Na-arụ ọrụ ọtụtụ okpomọkụ site na -40 Celsius ruo 80 Celsius.
Q3: you nwere ike ịmepụta ụdị ọdịnala, atụmatụ na akwụkwọ ozi?
A3: Ee, Anyị nwere ike ịme ụdị, aghụghọ, logos na leta ndị ahịa chọrọ.
Q4: Kedu otu esi enweta ego maka ngwaahịa m?
A4: You nwere ike izipu nkọwa nke imepụta gị na email anyị ma ọ bụ kpọtụrụ onye njikwa ahia anyị n'ịntanetị
A4: .All nke n'elu ahịa na gbakọọ site widest mgbe; ma ọ bụrụ na ogologo na obosara karịa 1mita, mgbe ahụ, a ga-agbakọ ha site na square mita
Q5: Enweghị m eserese, ị nwere ike ịhazi ya maka m?
A5: Ee, anyi nwere ike haziri gi ya dika oghomnu gi choro ka o di
Q6: Gini bu oge mbu maka usoro ozo? Kedu oge mbupu?
A6: Oge ndu maka usoro nha bụ 3-5 ụbọchị. Na ụbọchị 3-5 site na awara awara; 5-6 ụbọchị site na ikuku pịa.; 25-35 ụbọchị site na Oké Osimiri.
Q7: Ihe a ga - etinye maka akara aka maka volta mpaghara?
A7: Biko zuru ike, obi ga-enye gị mgbe ahụ.
Q8: Olee otu m ga esi esi tinye akara m?
A8: A ga-eziga akwụkwọ ntinye 1: 1 na ngwaahịa gị.
Q9: Olee ụdị mbukota ị na-eji?
A9: Afụfụ n'ime ya na akwara osisi atọ dị n'èzí
Q10: A ga - eji ihe ịrịba ama m n’èzí, mmiri anaghị agba ya?
A10: Ihe niile anyi jiri mee ihe bu antirust ma duputa ya n’ime ihe ngosi a.
Omenala Neon Led ịrịba ama
Mere Neon Banye Omenala
Ihe ngosi Neon
Ntinye Aka Neon
Neon ịrịba ama Vs akara ịrịba ama
Neon Style Dugara Ama